Xayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Xayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye
Xayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye
Seenaa ilmanamaa keessatti kuni boqonnaa haarawa
suuraa gaarreen Pluutoo argisiisu
Saayinsiin, keessattuu inni qorannoo samii, hojii daangaa ce’uufi fuullee haarawa saaquu cimsee itti fufeera. Tibbana gara mooraa qorattoota samii/hewaa (akkasuma dinqisiifattootaattis) gammachuu hedduu guddaa ta’e kan roobse xayyaarri qoranno samii New Horizons jedhamtu plaaneetii Pluutoo bira gayuu isiiti. Dhugumatti kuni waan hedduu diqisiifatamuu qabuudha; garee qorannoo kanaafi qorattotta hewaa irratti bobba’an qofaaf osoo hintaane kanniin saayinsii dinqisiifatan hundaaf.
Imala dheeraafi obsa fixachiisaa
Boqonnaa haarawatu saaqame. Xayyaarri qorannoo samii New Horizons sa’atti naannoo kiiloomeetira 50,000 olii balali’aa osoo takka hara hingalfanne woggaa 9 booda kiiloomeetira biliyoona 4.8 imalteeti kan plaaneetii Pluutoo bira geette. Bira gayuu qofa osoo hintaane suuraa dachii Pluutoo akka gaaritti kaasuudhaan gara ardii teenyaatti erguu dandetteerti. Pluutoon Solar System keenya keessatti plaaneetii hedduu aduu irraa fagaattee (akkasumas lafa irraas) argamtuudha. Egaa fageenyi kuni suuraan pluutoo biraa ergame nubira gayuuf sa’aa 4 akka itti fudhatu taasisa.
Kuni injifannoo guddaadha seenaa ilma namaatiif; keessumattuu saayinsii qorannoo samiif. Kanaaf gammachuun saayinsistootaa isa yeroo dhalli namaa ji’a irra miila isaa kaayyateen kan wolfakkaateef.
Ragaalee New Horizon wolitti qabde
Qorattoonni suuraa New Horizons ergite irraa baruu kan danda’an Pluutoon garreen addaddaa dheerina hanga meetira 3000 qaban qabaachuu isiiti. Hallayyaafi qileen addaddaa dachii Pluutoo (nannoo suuraan kaafame ) irraa dhabamuun isaa hedduu saayinsistootatti raajii ta’eera. Suuraa amma ilalaniin duratti qorattoonni Pluutoon akkuma plaaneetota kanniin biroo hallayyaa addaaddaa qabaati abdii jedhu qaban ture. Ji’a Pluutoo irratti, plaaneetiin heeddu ji’a ufii qabu, hallayyaa gadi fageenyaafi dheerina addaddaa qaban arguu danda’aniiru. Dhabamiinsi hallayaa tarii umriin Pluutoo dheeraa ta’uu dhabuu nimala gara shakkii jedhuutti qorattoota geesseera.
Dhuma xayyaara hewaa New Horizon
Hojii manaa xayayara samii New Horizons fi imalli isii Pluutoo sakatta’uu qofa irratti hindhaabbatu. New Horizons woggoota 20’n dhufaniif hedduu hewaa keessa lixuudhaan qorannoo daangaa haarawa saaqu irratti bobbati. Bifuma kanaan New Horizons naannoo Kuiper belt jedhamu, hewaa keessatti naannoo hanga ammaatti dhalli namaa hubannoo guddaa irraa hinqabne, ni qoratti. Wonti nama gaddisiisu New Horizons imala dheeraa kana boodaafi gumaacha saayinsii boqonnaa itti aanutti ceesisuuf goote booda, gootummaan ardii teennatti deebi’uu dadhabuu isiiti. Akkuma baateen hafti jechuudha, New Horizons. Raagaaleen qorannoo New Horizons wolitti sassaabdee gara ardii teenyaatti ergite dhala namaa woliin barabaraaf jiraata, garuu.
saayinsii qorannoo hewaa
Previous articleShiweeyinistaayigerfi Rahiim Sterliing Manchastaritti godaanan; waa’een S Raamos, K Benzemaafi Di Mariyaa akkuma rarra’etti
Next articleAddunyaa ispoortiitti qabeenyaan Riyaal Maadriid 1ffaa; Baarseloonaafi Manchastar 4ffaa fi 5ffaa dha